8 emahara makosi pane emahara software ye2015 | Linux Vakapindwa muropa
Dzidziswa neaya masere emahara makosi pane yemahara software
Ndinoda kutanga nemutsara uyu kubva Richard Stallman, mumwe munhu anoziva kune wese munhu pasoftware yemahara uye anogona kubvumirana pane zvimwe zvinhu kana kwete, asi pane izvi akarurama uye anoti seizvi:
“Mamwe makambani anogovera mahara software dzakachipa kana dzakachipa zvikuru kuzvikoro, vadzidzi vanodzidza kushandisa software iyoyo uye vanopedza kudzidza zvichienderana nezvirongwa zvavakadzidza. Asi ikozvino zvavasiri kudzidza, ivo havachagashiri emahara makopi echirongwa chavakadzidza kushandisa. "Makambani aya anoshandisa zvikoro semidziyo yekumanikidza vadzidzi kugara zvachose."
Nguva dzese dzatinoona sei Apple uye MicrosoftPamusoro pazvose, ivo vanopinda nharaunda dzekudzidzisa kuti vape matekinoroji avo. Sezviri pachena kuvandudza dzidzo uye kutsigira mapurojekiti edzidzo kana kuve maSamariya akanaka. Ndinoziva zvikoro umo vadzidzi vavo vanomanikidzwa kutenga iPads (haigone kuve dzimwe nzira), asi chete Apple zvishandiso. Izvi zvinoratidzika kwandiri kunge zvinomira uye hazvigone kunzi dzidzo.
Saizvozvowo, mazuva mashoma apfuura (kunyanya muna Ndira 10) kwaive kwakasimudzirwa kwakakurudzirwa naSantillana naAtresMedia, yakapihwa naAnna Simon uye mairi Elsa Punset, Roberto Brasero, Mario Alonso Puig, pakati pevamwe (vasina chokwadi nemutsa uye hunyanzvi hweimwe). Uye pakati pevamwe vanoonekwa mutungamiri weMicrosoft kuSpain, Maria Garaña. Uye Microsoft uye dzidzo haigoni kuenda pamwe chete kana kambani iyi isingapi zvirongwa zvakavhurika. Zvinondinyengedza ...
Mubazi redzidzo rakafanana, zvirongwa zvakaita seAutoCAD kana Solid zvinoshandiswa, pakati pevamwe, zviri pachena mapurogiramu ehunyanzvi, asi izvo zvinogadzira kutsamira pane muviri wevadzidzi vozozviita mumakambani avanopinda. Kana mudzidzi akadzidza kushandisa software kuyunivhesiti, havachazoda kudzidza chero chimwe chinhu uye ichi chichava icho mutero mukambani.
Y marezinesi ako yeaya software yakadhura zviuru zvine zviuru zveeuro, iyo nguva imwe neimwe yaunoda kuwana rezinesi nyowani kana kugadzirisa, uchafanira kubhadhara. Uye iyo mari inogona kushandiswa kubhadhara mari, yeR&D kana zvimwe zvinangwa zvine musoro.
Ichi chinhu chiri pamutemo, ini handisi kuti imhosva, kunyangwe Unix Yakave yakapararira zvakanyanya nekuda kwechikonzero ichi, sezvo yaive iripo mumayunivhesiti uye ipapo vadzidzi vakaiendesa kumabasa avo. Asi Unix haina kukunda, yakasarudzwa kuve yakanakisa ...
Asi zvandiri kureva ndezvekuti handifunge kuti zvine mutsindo zvauri makuru makambani usavande kuseri kwebhizinesi redzidzo. Sezvo ini ndisingade kuti vanozivikanwa kana mabhureki vanopa mari kuzvipo zvinopa uye nekuzvisimudzira kumhepo ina. Kana iwe uchida kutsigira, zviite, urikuita chimwe chinhu chakakura, asi usachiisa. Nekuti kana isingakwanise kukutungamira kuti ufunge pamusoro pehukama uye kuti iwe unozviita kuti uzvisimudzire iwe.
Zvinenge zviri nani kupa dzimwe nzira kuitira kuti mumwe nemumwe agone kusarudza yaanoda. Uye mune chero mamiriro ezvinhu, kana paine chimwe chinhu chakamisikidzwa (icho chisingafanirwe kumisikidzwa), gadzirira yakavhurwa sosi software sezvo iri yemahara uye isingatakure chero mhando yekufarira, mukuwedzera pakusamanikidza mhuri kushandisa mari yavasingaiti ivo vane nekuti mwanakomana wavo kuchikoro akanzi auye neIpad kana Microsoft Surface.
Naizvozvo, mune ino chinyorwa uye mushure meizvi sumo yakakomba, tinokupa iwe 8 yemahara yemahara software makosi, kunyangwe mamwe acho achibhadharwa, asi mahara dzimwe nzira dzinopihwa:
Mufananidzo unodzokorodza kosi neGIMP - Imwe nzira: YEMAHARA GIMP KOSI (MAVHIDHIYO)
Dhijitari yekudhirowa kosi neKrita - Imwe nzira: VHIDHIYO-DZIDZISO
Vector Graphics ine Inkscape - Imwe nzira:YEMAHARA INKSAPE COURSE
Dhijitari bhuku dhizaini neScriptus
Rongedza kodhi yekodhi neVim
Hofisi otomatiki neLibreOffice - Imwe nzira: YEMAHARA LIBREOFFICE COURSE: nyora / Calc / Impress
Gadzira rako gore neakoCloud
App kuvandudza FirefoxOS
Zvimwe: Yemahara Arduino Course / Blender Chinyorwa
Hatigone kushandura makirasi kuita matanga uye zviri kuitwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Dzidziswa neaya masere emahara makosi pane yemahara software
Ivo havana kusununguka chero iwo anobva ku gimp ini handisati ndaona vamwe
Iyo libreoffice kosi haina yemahara kana
Pindura kune thpkllr
Mhoroi, kwanga kuri kukanganisa kwandiri. Ini ndatoisa imwe nzira yekubatanidza yemahara makosi kana dzidziso kune avo vanobhadharwa. Ndawedzerawo mamwe maviri sekuwedzera.
Izvo zvakanaka! Ndatenda nekuisa zvimwe zvinyorwa.
Pindura kune thpnkllr
kukanganisa munhu kugadzirisa huchenjeri, ndatenda shamwari
Ndinoda kosi yeemcas asi handioni iyo hahaha
chakanakisa, mazuva ese, kune kugamuchirwa kwakawanda mahara software
Mhoro. Zvakanaka, ngatione kana izvi zvichikubatsira iwe.
Ndatenda zvikuru nechinyorwa chikuru ichi. Ini ndaisaziva iyo Gimp vhidhiyo kosi. Ini ndasaina uye iguru, super yakazara! graxxxx zvakare!
Pindura kuna kelian
Haze OS: iyo Frankenstein yekugovera